चितवन । टप वन मिडिया प्रालिको आयोजनामा भरतपुरमा भएको ग्राण्ड फिनालेमा मिस ब्युटी अफ चितवनको ताज कृती चौधरीले लगाएकी छन् । उक्त प्रतियोगितामा फस्ट र सेकेन्ड रनर अप क्रमशः नबिना कँडेल र रस्मिता अधिकारी भइन् । त्यसैगरी प्रतियोगितामा अर्गनाईजर च्वाइस प्रतिक्षा अधिकारी, मिस कन्फिडेन्स प्रतिक्षा अधिकारी, मिस पपुलर कृति चौधरी, बेस्ट वक प्रतिक्षा अधिकारी, वेष्ट आईज खुसी सुनुवार, मोस्ट फोटोजेनिक कमला खत्री ... read more...
काठमाडौं । चलचित्र ‘परदेशी-२’ को शुभमुहूर्त गरिएको छ । चलचित्रका प्रमुख कलाकारहरुको उपस्थितिमा वैदिक विधि अनुसार ललितपुरको कार्य विनायक मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी चलचित्रको शुभसाइत गरिएको हो । कार्यविनायक मन्दिरमा पूजा सम्पन्न भए लगत्तै शुक्रबार नै दक्षिणकाली मन्दिरमा समेत पूजा गरिएको थियो । ‘गोर्खा पल्टन’ र ‘परदेशी’ जस्ता दुई सफल चलचित्रका लेखक र निर्देशक नारायण ... read more...
स्कुटर दुर्घटनामा नायिका महिमा सिलवालको मृत्यु
२०७६ फागुन १ गते १०:०३
धादिङ । गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर दुई चाम्बासमा बुधबार साँझ भैरहवाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको लु २ ख १३५ नम्बरको बसले बा ९८ प ७०५८ नम्बरको स्टुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटरमा सवार नायिका महिमा सिलवालको मृत्यु भएको छ । बसको ठक्करबाट घाइते सिलवालको प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र गजुरीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो भने उनीसँग स्कुटरमा सवार उनकी बहिनी शर्मिला सिलवालको समेत मृत्यु भएको छ । उनलाई उपचारका ल ... read more...
काठमाडौं । रवीन कन्दङ्वाको स्वरमा रहेको गीत ‘मेरो सपनाको भारी’ को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उदितप्रकाश सिग्देलको शब्द र हरि लम्सालको संगीत तथा संयोजन रहेको उक्त गीतको भिडियोलाई निकेश खड्काले निर्देशन गरेका छन् । म्यूजिक भिडियोमा आकाश श्रेष्ठ, प्रियंका खड्का र रवीनलाई फिचरिङ गरिएको छ । चन्द्र चौधरीको मिक्सिङ तथा माष्टरिङ रहेको भिडियोमा बुद्ध थापाले छायाँकन र विकास धमलाले स ... read more...
पोखरा । सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक दुवै हिसाबले नेपाली नाटकका सर्वोच्च प्रतिभा नाट्यसम्राट् बालकृष्ण समको ११८ औं जन्मजयन्ती पोखरामा धुमधामका साथ मनाइएको छ । नेपाली वाङ्मयको जरो संरक्षण र टुुप्पो जोगाउनुपर्ने अभियानका साथ क्रियाशील जरोटुप्पो संरक्षण साहित्य समाज नेपालले नाट्यसम्राट्क समको जन्मजयन्ती विशेष समारोह आयोजना गरेर मनाएको हो । कार्यक्रममा प्राडा रामचन्द्र पोखरेलले बालकृष्ण समको नाट्यकारिता विष ... read more...
गीतकार दिपाको 'हाँसी हाँसी' मा चर्चित गायिका अञ्जुको स्वर (भिडियोसहित)
२०७६ माघ २१ गते १०:४२
काठमाडौं । कवि तथा गीतकार दिपा मेवाहाङ राईले आफ्नो पहिलो गीत 'हाँसी हाँसी' को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरेकी छन् । गीतमा शब्द दिपा मेवाहाङ राईको रहेको छ भने संगीत कोरियामा नै रहेका संगीतकार डिआर अटुको रहेको छ । गीतमा स्वर चर्चित तथा लोकप्रिय गायिका अन्जु पन्तको रहेको छ । गीतको संगीत संयोजन राजु कार्कीले गरेका हुन् । म्यूजिक भिडियोमा लक्ष्मी बर्देवा र रमेश बानियाको जिवन्त अभिनय देख्न सकिन्छ । बुद्ध ... read more...
मङ्गोलियन हार्टका लामा भन्छन्,'बिहे नगरी भा छैन' (भिडियोसहित)
२०७६ माघ ९ गते १९:४२
काठमाण्डौ । चर्चित गायक राजु लामाको आवाजमा ’बिहे नगरी भा छैन’ गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उक्त गीतमा चर्चित संगीतकार आरबि लामाको शब्द तथा संगीत रहेको छ । गायन क्षेत्रमा चर्चा कमाइसकेका आरबि लामाले शब्द तथा संगीत रहेको उक्त गीतमा दिपेश प्रधानको मिक्सिङ, स्व. बबिराज घतानिको एरेन्ज रहेको छ । भिडियोलाई बिरेन्द्र भट्टले छायांकन, टेकेन्द्र शाहले कलर तथा सम्पादन गरेका हुन् भने हेर ... read more...
भीमदत्तनगर । ‘कामप्रतिको लगाव र परिश्रमले जुनसुकै क्षेत्रमा सफल भइन्छ’ भन्ने उदाहरण युवा देउडा गायिका रेखा जोशी बनेकी छन् । पछिल्लो समय उनले आफूलाई सुदूरपश्चिमको देउडा क्षेत्रमा अब्बल सावित गराउन सफल भएकी छन् । पाँच वर्षअघि मात्रै देउडा गायन क्षेत्रमा उनी प्रवेश गरेकी थिइन् । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका-७ हल्दुखा निवासी उनको कर्णप्रिय देउडा गीत सुन्न श्रोता औधि मनपराउँछन् । उनी यहाँका ... read more...
पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि आस्था सम्पर्कविहिन, खोज्दै प्रहरी
२०७६ माघ ६ गते १०:२५
काठमाडौं । गायिका आस्था राउतविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति दिएपछि उनी भने सम्पर्कविहिन भएकी छन् । गत बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानीथलमा नियमित चेकजाँचका क्रममा महिला प्रहरीले आफूलाई अभद्र ब्यवहार गरेको भन्दै उनी भिडियो आइभमा आएकी थिइन । सो क्रममा उनले प्रहरीलाई तुच्छ गालीगलौज पनि गरेकी थिइन् । उक्त काण्ड सार्वजनिक भएलगत्तै प्रहरीले ... read more...
काठमाडौं । गायक एंव सङ्गितकार कारसाङ लामाको संगीतमा 'तिम्रो मुटु, मेरो मुटु' को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतमा भ्वाइज अफ नेपालको टप ८ मा पर्न सफल गायिका मेचु धिमार र नारायण थापाको स्वर रहेको छ । त्यस्तै उक्त गीतमा सुन्दर पन्तको शब्द र कारसाङ लामाको संगीत रहेको छ । म्यूजिक भिडियोलाई निर्देशन तथा छायाँकन भने प्रेम लामाले गरेका हुन् । भिडियोलाई राज महर्जनको कोरियोग्राफी, सुवास डाँगीको ड्रोन ... read more...
काठमाडौं । चर्चित गायिका आस्था राउतले आफूलाई त्रिभुवन विमानस्थल (आन्तरिक) मा खटिएको महिला प्रहरीले अपमानजनक व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत लाइभ भिडियो गरेपछि उनी आफै पनि विवादमा परेकी छन् । उनले अपमानजन व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक भएको भिडियोमा नेपाल प्रहरीलाई डन्टेलगायतका शब्द प्रयोग गरेर गालीगलौज गरेपछि उनलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला ... read more...
काठमाडौं । दरबारमार्गस्थित रहेको वान थाई रष्टुरेन्टबाट आफ्नो नियमित गायन प्रस्तुती सकेर घर फर्किने क्रममा कार दुर्घटना परी गायक निशान भट्टराईको निधन भएको छ । उनी आफैले चलाएको कार तीनकुनेमा दुर्घटनामा परेको थियो । दुर्घटनामा परेका भट्टराईलाई गम्भीर अवस्थामा वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा पुर्याइएको थियो । चिचित्सकहरुले रातभर उनलाई बचाउन प्रयास गरेता पनि सफल हुन सकेनन् । उनको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएक ... read more...
काठमाडौं । निनाम हाङ राई र वविन किरातीको स्वरमा रहेको गीत ‘मैना मैनी’ को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार राजधानीको सरस्वतीनगरस्थित फलैंचामा एक कार्यक्रमबीच गीतकार सङ्घका उपाध्यक्ष शुभ मुकारुङको प्रमुख आतिथ्यतामा पर्यटन प्रर्वद्धन सम्बन्धि गीत ‘मैना मैनी’ को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो । दीलिप राई ‘सागर’ को शब्द, सन्तोष दुमीको सङ्गीत, दिवेश राईको एरेञ्ज रहेको उक्त गीतको भिडियोलाई ... read more...
काठमाडौं । नेपाली कथानक चलचित्र ‘इन्काउन्टर’ को गीत ‘बारूली बारूली’ को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । काठमाडौंको अनामनगरस्थित पाना क्याफेमा बिहीबार आयोजित समारोहमा आइटम गीत बारूली बारूली को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त गीतलाई ओएसआर डिजिटलबाट वल्र्डवाइड रिलिज गरिएको हो । समारोहमा प्रमुख अतिथि अग्रज पत्रकार ऋषि धमलाले औपचारिक रूपमा गीत रिलिज गरेका थिए । फिल् ... read more...
रामप्रसाद जीको पहिलो छोरो हुदाँ पत्नीले भनिन,'बच्चालाई गुरुकुलमा शिक्षा दिलाउँ, मैले सोचेकी छु कि गुरुकुलमा शिक्षा दिएर यसलाई धर्म ज्ञाता पन्डित योगी बनाउँछु ।' राम प्रसादजीले पत्नीलाइ भने,'पाण्डित्य पूर्ण योगी बनाएर यसलाई भोकै मार्नु छ र ? मैले यसलाई ठुलो अफिसर बनाउँछु ताकि दुनियाँमा एक सफल मानिस बनोस् ।' राम प्रसादजी सरकारी बैंकमा खजान्ची पदमा थिए । पत्नी धार्मिक थिइन् र इच्छा थियो कि छोरो पाण्ड ... read more...
काठमाडौं । तामाङ समुदायका महानायक अमिर दोङ र मोडल सूचना थोकर अभिनित 'नेमान ज्याबा ए माया' गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उक्त गीतमा चर्चित गायिका जीतु लोप्चन र प्रयास दोङले स्वर दिएका छन् । उक्त गीतका शब्द, संगीत र संगीत संयोजन समेत गायक प्रयास दोङकै रहेको छ । उक्त म्यूजिक भिडियोको सम्पादन, कोरियोग्राफी, निर्देशन भने नायक तथा मोडल अमिर दोङले गरेका छन् । नव मोडल सूचना थोकरको अभिनय पनि उत्क ... read more...
काठमाडौं । चर्चित गायिका जितु लोप्चन र गायक एंव सङ्गितकार निरोज लामाको आवाजमा रहेको 'एदा म्हङरी' बोलको गीत बजारमा आएको छ । तामाङ आधुनिक गीत काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजानिक गरिएको हो । ’तामाङ आधुनिक सांगीतिक क्षेत्रमा नयाँ प्रेम गीत लिएर आएको र दर्शकले मन पराउनेमा विश्वस्त छु ।’ गायिका लोप्चनले बताइन् । गीतमा सञ्चारकर्मी एंव गीतकार विवेक लोप्चनको शब्द लेखेका हुन् भने गायक एंव ... read more...
काठमाडौं । एक्सन नायक विराज भट्ट अभिनित चलचित्र ‘साङ्लो’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । नायक विराधले एक्सन प्रधान सिनेमाबाट निर्देशका रुपमा पनि डेब्यु गरेका छन् । उक्त चलचित्रमा मूक कथालाई भने सस्पेन्स राखिएको छ । उक्त चलचित्रमा ‘मिस नेपाल-२०१७’ की विजेता निकिता चाण्डकलाई पनि देख्न सकिने छ । विराजले निकितासँग जोडी बाँधेका छन् । यो चलचित्र निकिताको डेब्यु चलचित्र ह ... read more...
गायक आरके लामाको ‘सुपारी खान’ सार्वजानिक (भिडियोसहित)
२०७६ पुस १७ गते ११:३३
काठमाडौं । गायक आरके लामाको आवाजमा रहेको ‘सुपारी खान’ बोलको गीत सार्वजानिक भएको छ । पछिल्लो समयमा मोडलिङ यात्रामा दर्शकको मन मुटुमा रहन सफल मोडल धन्जित लामा र निरान्जली लामाको अभिनय समेटिएको उक्त गीत दश म्यूजिकबाट सार्वजानिक गरिएको हो । मोडल धन्जितले अभिनय गरिएको दर्जनौ भिडियो हिट छन् । फरक शैलीको यो भिडियोमा उनले उत्कृष्ट अभिनय गरेको दर्शकहरुको प्रतिकृया छ । गीतमा सङ्गिता थापा मगरको श ... read more...
‘मेरो मायाले छुन्छ छुुदैन’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
२०७६ पुस १३ गते १३:३०
काठमाडौं । विश्व कीर्तिमानी गीतकार डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘मेरो मायाले छुन्छ छुुदैन’ सार्वजनिक भएको छ । योगेशकाजी र सारिका घिमिरेको स्वरमा रहेको गीत ‘मेरो मायाले छुन्छ छुुदैन’ को भिडियो सार्वजनिक भएको हो । योगेश काजीको सङ्गीत तथा सङ्गीत संयोजन, एचबीएन किस्मतको मिक्सिङ तथा माष्टरिङ रहेको गीतको भिडियोलाई गम्भिर विष्टले निर्देशन तथा कोरियोग्राफ गरेका हुन् । काटुन क्रुजका ... read more...